Gorfayn Ku Saabsan Tallaabadii Gudoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Dawladdu Ku Caydhiyo Hawl-wadeenada Qaranka...
Monday May 11, 2020 - 20:08:13 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Dhawaan ayay soo baxday in farriin moobil lagu eryay shaqaale ka tirsan dawladda Somaliland oo u jawaabtay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Somaliland Hinda Jaamac Xirsi, kaddibna waxa soo baxay warqad uu qoray Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha iyo laba qoraal oo isla masuulkaasi faafiyay. Haddaba dhacdadu ma ugub baa mise waa bilaw baa?.
Marar badan waxa dhacay in Xisbiga WADDANI uu gudbiyay dacwad ka dhan ah shaqaale dawladeed oo KULMIYE u galay olole, wax tallaabo ah lagama qaadin. Waxa dhacday in shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafintu ay shir jaraaid ku naqdiyeen Wasiir Guri-barwaaqo, wax eri ah laguma fulin.
Sharcigu ma mid la fuliyo maalinta dan la leeyahay baa?
Miyaanu erigu ahayn tallaabada u dambaysa ee la qaado?
Ralligelinta shaqaalaha laga dalbay waa mid noocee ah?
Miyaanay jirin digniin afka ah ama mid qoraal ahi?
Farxaan Aadan Haybe waxa uu beeninay in aanay haayadda shaqaalaha dawladdu taleefan wax ka eryin, marka uu sidaas leeyahayna waxa qornaydba warqadda uu isagu ku saxeexan yahay. Miyaaanay labada farriimood gudbinaynnin duluc iyo ujeeddo isku mid ah? Mise waxa uu leeyahay warqaddayda ayaa ah awoodda kama-dambaysta ah?.
Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Dawladda Somaliland marka laga yimaaddo in uu caydhiyay Hani Warsame Sulub, ma caddaynin meesha uu saarayo xuquuqdeedii shaqaale, ma caddayn in ay ambiil ka qaadan karto ama dacwoon karto. Guddoomiyaha Haayadda Shaqaalaha Dawlladda Somaliland Farxaan Aadan oo 2016kii ilaa 2017kii ahaa Wasiirkii wasaaradda duulistu, waxa uu tallaabo noocan ah ku caydhiyay Garyaqaan Ayaanle Xalliye oo dhanka sharciga u qaabbilsanaa wasaaraddii duulista, waana tallaabo uu illaa hadda ku kacayo, isaga oo cid ku raalli-gelinaya. La soco Faalada Shabakada Xogreebnews